स्वास्थ्य पेज » बुद्धि बंगाराले सताउँन सक्छ, ढुक्क भएर फाल्नुस् बुद्धि बंगाराले सताउँन सक्छ, ढुक्क भएर फाल्नुस् – स्वास्थ्य पेज
बुद्धि बंगाराले सताउँन सक्छ, ढुक्क भएर फाल्नुस्
बुद्धि बंगाराको काम केही हुँदैन । मानिसलाई दुःख मात्र दिन्छ ।
डा. प्रतिक श्रेष्ठ
दाँतको लहर पछाडिको दाँत बुद्धि बंगारा हो । यो विशेषगरी १७ वर्षदेखि २१ वर्षसम्मका युवामा बढी आउँछ । कतिपयलाई २३ वर्षसम्म पनि आउँछ । १५ वर्ष उमेरभित्र सबै स्थायी दाँत लगभग आइसकेको हुन्छ । तर, १७ वर्षदेखि २३ वर्षसम्म आउने बाँकी दाँत बुद्धि बंगारा हो । यो चारवटा हुन्छ । तल्लो लहरमा दुई र माथिल्लो लहरमा दुई ।
यो बुद्धि आउने कुरासँग कुनै अर्थ राख्दैन । यसो भन्नुमा कुनै वैज्ञानिक र प्रमाणित तथ्य छैन । यो परम्परागत भ्रम मात्रै हो ।
पहिलेका मानिसहरुमा बोन साइड ठूलो हुन्थ्यो । ३२ वटै दाँत अट्थ्यो । तर अहिले ८०-९० प्रतिशत मानिसमा वोन साइड सानो छ। जस्का कारण थप दाँत आउँदा दुखाई बढी हुने गरेको हो । अर्को कुरा दाँतको गिजाभित्र खानेकुरा त्यहाँ फस्छ । खानेकुरा फसेपछि मुख भित्र रहेको किटाणु सक्रिय हुन्छ र त्यही खानेकुरा कुहिएर संक्रमण सुरु हुन्छ । सुरुसुरुमा गिजा सुन्निे, ज्वरो आउने हुन्छ र पछि पिप जम्ने, मुख खोल्न नसक्ने हुन्छ ।
उसो भए यो दाँतको काम छैन त ?
हो, बुद्धि बंगाराको काम केही हुँदैन । मानिसलाई दुःख मात्र दिन्छ । पछिल्लो समय यसलाई फाल्ने चलन बढ्दै गएको छ । विदेशमा धेरै ठाउँमा पहिलेदेखि नै फाल्ने गरिन्छ । तर, नेपालमा यो दाँत फाल्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । यो दाँतले अति दुःख दिए मात्रै डाक्टरसमक्ष जाने चलन नेपालीमा छ । यो बंगारा फाल्दा कुनै समस्या हुँदैन । बुद्धि बंगारा ढुक्क भएर फाल्दा हुन्छ ।
(दन्त चिकित्सक, डा श्रेष्ठ गणपति डेन्टल क्लिनिक नेपालगन्जमा कार्यरत हुनुहुन्छ )